Dawladda Deegaanka Oo Ra'iisal Wasaare Abiy Ahmed Ka Codsatay Miisaaniyad Lagu Dhiso Jidad Ku Xidha Kenya Iyo Somalia - Jigjiga Online
HomeSomalidaDawladda Deegaanka Oo Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed Ka Codsatay Miisaaniyad Lagu Dhiso Jidad Ku Xidha Kenya Iyo Somalia
Jigjiga (JigjigaOnline) – Xukuumadda dawladda deegaanka Somalida ayaa ka dalbaday dawladda dhexe in miisaaniyad sannadeedka loogu daro waddooyin laami ah oo ku xidhiidhiya dalalka jaarka.
Qoraal codsi ah oo xukuumadda uu hoggaamiyo Madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar u gudbisay dawladda Federaalka oo nuqul ka mid ah ay heshay warbaahinta Jigjiga Online ayaa waxa lagu sheegay in deegaanku u baahan yahay in miisaaniyad sannadeedka 2012 ee tirsiga Itoobiya loogu daro miisaaniyad lagu dhiso jidad muhiim ah oo laami ah, kuwaas oo xidhiidhin doona deegaamo badan oo dalka gudihiisa ah.
Qoraalka waxa kale oo lagu sheegay in jidadkaasi ay dalka Itoobiya ku xidhi doonaan Somaliya iyo Kenya.
DDS ayaa doonaysa inay samayso laba waddo oo dhererkoodu yahay 340km iyo 376km, kuwaas oo ay midkood si toos ah u tegi doonto deegaamada xuduudka Kenya, halka midda kalena ay dhinaca xadka Somaliya tegi doonto.
Jidka koowaad ee ay doonayso Xukuumadda Mustafe inay miisaaniyad u hesho ayaa waxa uu xidhiidhinayaa deegaamada Nageye Borana, Filtu, Malka Dida, Kolo, Dolo Ado iyo Suuftu, waxaana uu dhererkiisu noqonayaa 340km.
Jidka labaad ee ay DDS dhismihiisa lacagta u dalbanayso oo dhererkiisu yahay 376KM ayaa waxa uu xidhiidhinayaa deegaamada Ginir, Barhare, Dinik, Oda, Raytu, Bardimtu, Raaso, Iimay, Abaaqorow, Berano iyo Goday.
Halkan ka akhriso qoraalka oo dhamaystiran: